Osimiri Salmon na akwukwo nri kpọrọ nkụ Cat Food 1Kg | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tesco Salmon And Vegetables Dry Cat Food 1Kg– Ordrs
Osisi Salmon na akwukwo nri kpọrọ nkụ Cat Food 1Kg
Nri anụ ụlọ zuru ezu maka nwamba ndị okenye gbara afọ 1-7.
Tesco Salmon kpọrọ nkụ Cat Food 1kg. 100% zuru oke, nwere vitamin dị mkpa na mineral iji kwado ezé na ọkpụkpụ siri ike Omega 6 na Zinc iji kwalite akpụkpọ ahụ siri ike na mkpuchi Crunchy kibbles iji nyere aka mee ka ezé ghara ịdị ọcha Ọdịdị Artificial No Artificial Colors Anyị na ndị otu anyị na-ekepụta nri na-atọ ụtọ. nke ndị ọkachamara na-eri nri na-edozi ahụ maka afọ 30. Jiri nlezianya dozie iji ihe ndị na-edozi ahụ sitere na ala na ndị na-ebubata anyị, nri anyị niile zuru oke, guzozie ma wusie ike na vitamin, mineral na nri, na-ahụ ezigbo ahụ ike maka anụ ụlọ gị. Anyị anaghị agbakwunye flavors ma ọ bụ agba ndị ọzọ.
Mepụtara na Pet Nutrition ọkachamara
Ngwugwu ngwugwu: 1kg